Wasaqda biyaha lagu shubo oo bilaash ah | Abuurista khadka tooska ah
Arnau Apparisi | | Khayraadka, Textures
Maalmo ka hor waxaan kuu soo qaadanay cashar ku saabsan sida loo sameeyo noocyada saamaynta biyo-biyoodka, maanta waxaan kuu soo qaadaneynaa xulasho ka mid ah wasakhda biyaha bilaash inaad codsan karto casharkaan. Sawirada aan kugu soo qaadanay kiiskan waa kuwo gebi ahaanba bilaash ah oo tayo sare leh oo kuu oggolaan doona adiga oo aan ku dabaqin casharrada aan maalmo ka hor ku tusnay oo keliya laakiin sidoo kale naqshadahaaga.
La xulashada koowaad tan lix wasakhda biyo-biyoodka ah Waxay kuu oggolaaneysaa inaad ku darto xoogaa taabasho ah dhibco midabbo leh nashqadahaaga. Sawiradani waxay soo galaan .PNG asal ahaan taas oo noo ogolaaneysa inaan ku darno qaabkeena qaab dabiici ah. Xaaladdan oo kale ma haystaan ​​warqad qoraal ah, tani waxay noo oggolaaneysaa inaan ku darno dusha sare, laga bilaabo sawirada aan dooneyno inaan ku siino xoogaa taabasho midab ah, xirmooyin ah oo aan dooneyno inaan ku siino taabasho diirran oo ka casrisan. Xulashada waxaa ku jira seddex barood oo midab-diirran leh oo midab leh (liin, casaan, magenta, jaalle, boorash, iyo bunni) iyo seddex baro baro midab leh (buluug, cagaar, guduud, casaan).
La soo qaad labaad wuxuu ka kooban yahay kuwa kale lix wasakhda biyo-biyoodka ah Waxaan sidoo kale ku helnaa iyaga oo bilaash ah qaab ballaaran, tani waxay noo oggolaaneysaa inaan ballaarinno ama dooranno kaliya qayb ka mid ah barta. Ama in lagu dabaqo naqshadeynta naqshadaheena ama in loo isticmaalo qaab ka ballaaran. Xulitaankan sidoo kale waa qaab .PNG Asal ahaan taas oo naga badbaadinaysa waqtiga nadiifinta wasakhda, xaaladdan oo kale ma haystaan ​​warqad midkoodna.
Si ka duwan xulashada ugu horeysa dhibcahaani waxay leeyihiin a dulmar aan joogto ahayn, sidaa darteed iyagu waa ku habboon yihiin in lagu dabaqo sida shaashadda. Xulashada waxay ka kooban tahay lix dhibic, xaaladdan xulashada midabada ayaa ka ballaaran oo ka firfircoon.
Labada xaaladoodba tallooyinkayga shaqsiyeed waa inaad wax ka beddesho labada midab iyo habka loo adeegsado, si aad u aragto isu-ekaanta kuwan iyo xaddiga xulashooyinka ay na siinayaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Nadiifinta biyo-biyoodka bilaashka ah ee naqshadahaaga
Adobe ayaa bilawday Photoshop Fix on Android si loo hagaajiyo wajiyada iyo sawirada
Adobe wuxuu la shaqeeyaa iskaashi wuxuuna soo bandhigayaa qalab naqshadeysan oo sawir-qaade 3D ah